Ihe nyocha jupụtara na ruby, Fissure jupụtara ruby ​​- video
Tags jupụta, Iko jupụtara, Ruby
Na-ejuputa mpempe akwụkwọ ma ọ bụ nkedo n'ime rubi na iko iko ma ọ bụ ihe yiri ya n'ụzọ dị egwu na-eme ka nghọta nke nkume dịkwuo mma, na-eme ka rubies ndị na-adịghị mma n'oge kwesịrị ekwesị maka ngwa na ọla. Nchọpụta jupụtara na ruby ​​bụ ihe dị mfe na uru ya bara uru karịa ruby ​​na-adịghị edozi.
Zụta iko jupụtara na rubi na ụlọ ahịa anyị
Ibu iko jupụtara rubi
A siri ike mee ka nkume ndị siri ike dị ọcha kpochapụ adịghị ọcha niile nke nwere ike imetụta usoro ahụ
A na-ehichapụ nkume siri ike na hydrogen fluoride
Usoro kpo oku mbu nke oge etinyeghi ntunye ya. Usoro kpo oku kpochapụrụ adịghị ọcha n'ime ọkpọ ahụ. Ọ bụ ezie na enwere ike ịme nke a na okpomọkụ ruo 1400 Celsius (2500 Celsius F) ọ yikarịrị ka ọ na-adị na okpomọkụ nke ihe dị ka 900 Celsius C (1600 Celsius F) ebe ọ bụ na silk rutile ahụ ka dị.
Nke abụọ kpo oku usoro ke eletriki oven dị iche iche chemical nwekwara. Ihe ngwọta dị iche iche na ngwakọta egosila na ha nwere ihe ịga nke ọma, agbanyeghị ka ọtụtụ n'ime ha nwere iko-ntụ ntụ na-eji ugbu a. A na-etinye rubi n'ime mmanụ, wee kpuchie ya na ntụ, tinye ya na taịlị ma debe ya na oven ebe ọ na-ekpo ọkụ na gburugburu 900 Celsius (1600 ° F) maka otu awa na ikuku ikuku. Oroma na-acha ntụ ntụ na-agbanwe n'elu kpo oku ka ọ bụrụ nke na-acha odo odo, nke jupụtara na mgbaji niile. Mgbe obi dị ụcha nke mado ahụ n'ụzọ zuru oke ma na-eme ka nghọta zuru oke nke rubi dị jụụ.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịgbakwunye otu agba, a ga-enwe ike “mekwuo” iko ntụ ahụ na ọla kọpa ma ọ bụ ọla edo ndị ọzọ yana ihe ndị ọzọ dịka sodium, calcium, potassium wdg.
Enwere ike ịmegharị usoro kpo oku nke abụọ ugboro atọ ruo ugboro anọ, ọbụlagodi itinye ngwakọta dị iche iche. Mgbe ọla nwere rubi dị ọkụ maka nrụzi. Ekwesighi ya na boracic acid ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, ebe nke a nwere ike ịgbanye elu. Okwesighi ka echedo ya dika dayamọnd.
Iko jupụtara ruby ​​njirimara
Enwere ike ịmata ọgwụgwọ ya site na ịkọpụta afụ na cavities na mgbaji agbaji na-eji loupe 10 '.
Kedu ka m ga - esi mara ma rubi juru iko?
Dị njirimara kachasị ama nke ruby ​​mejupụtara bụ ikuku gas dị n'ime. Ndị a nwere ike ịbụ otu gburugburu ma ọ bụ igwe ojii nke egosipụta, ịha aha ma ọ bụ mechie, ha dịkwa ugbu a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ rubies niile. Ọtụtụ mgbe, a na-ahụ ha anya na enweghị enyemaka.
Ndi iko juru Ruby?
Ee, Ọ bụ nkume e mesoro. Emepụtara site na iji okpomọkụ na mmewere iji weta ụcha ọbara ọbara dị ka ruby ​​na-adịghị edozi, A na-emeso nkume ahụ jupụta nkume mejupụtara ndị dị na nkume ahụ. Ihe ndị a dị ka nkume a na-agwọghị, ma ha adabaghị na ike na nguzogide nke ezigbo nkume nwere.
Ndi iko juputara na rubi abaghi ​​uru?
Glass jupụtara ruby ​​bara uru dị ọnụ ala karịa ruby ​​na-adịghị edozi. Ofrụ ọrụ nke ọgwụgwọ dị ịtụnanya, na ọ na-agbanwe corundum nke na-adịchaghị mma na ihe na-abaghị uru na ihe na-egosipụta nke ọma iji rụọ ọrụ na ọla. N’ezie, okwute ndị ahụ nwere ike ịdị ka nke na-adọrọ mmasị onye na-azụghị ego. O nwere ike ịbụ iri ma ọ bụ puku ugboro dị ọnụ ala karịa otu nkume na-adịghị edozi.
Anyị na-eji ọla edo eme ihe maka mgbaaka juputara na mgbaaka, ọla ntị, mgbaaka, olu ma ọ bụ ihe olu.
Tags Ruby, kpakpando
Tags Ruby, kpakpando, sịntetik